प्रा. डा. कमल कोइराला
“यसलाई पायल्स भएको छ । ६ महिनादेखि औषधि गरिराखेकी छे । ठिकै भएन डाक्टर साब ।” भर्खर १८ वर्ष पुगेकी छोरीलाई लिएर आउनु भएको थियो उहाँको बुवा । जाँच गर्दा क्यान्सर भएको पाइयो । अपरेसन गर्न नमिल्ने गरी फैलिसकेको अवस्थामा ।
“मेरो बुवालाई प्रत्येक वर्ष प्याकेजमा हेल्थ चेकअप गराइरहेको थिएँ, आज एक्कासि मलद्वारको क्यान्सर, त्यो पनि पेटभरि फैलिएर उपचार सम्भव नहुने स्टेजमा” आँखा भरी आँसु पार्दै आफ्नो ८२ वर्षको बुवाको उपचार खोज्दै आउनुभएको थियो उहाँको छोरा ।
“पेट फुल्ने समस्याले तीन महिनादेखि अस्पतालमा धाइरहेको छु, ग्यास्ट्रिकको उपचार जति गरे पनि ठिक भएन डाक्टर साब ।” आफ्नो २२ वर्षको भाइ जँचाउन ल्याउने दाइको पीडा थियो यो । छानबिन गर्दा उसको पनि क्यान्सर नै पत्ता लाग्यो । तर सर्जरी गरेर रोग फाल्न मिल्ने । जिन्दगीभरि दिशा निस्कने ब्याग पेटमा झुन्ड्याउनु पर्ने । त्यसपछि केमोथेरापी पनि दिइरहनु पर्ने ।
यस्ता घटनाहरू अस्पतालमा कहिले काहीँ मात्र देखिने गर्छन् । तर जसलाई पर्यो उसले जिन्दगीमा धेरै गुमाएको हुन्छ । यी तिनै जना बिरामीलाई मलद्वार भित्रको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको थियो । यदि बैलेमा सम्बन्धित चिकित्सकले जाँच गरेको भए रोग सुरुवाती अवस्थामै पहिचान हुन सक्थ्यो, उपचार सम्भव हुन्थ्यो र धेरै वर्ष बचाउन सकिन्थ्यो । चिकित्सकले मलद्वारबाट औँला राखेर जाँच गर्थे । मलद्वार र ८–१० सेन्टिमिटर भित्रसम्मको घाउ, क्यान्सर वा अन्य समस्या पत्ता लगाउने उत्तम उपाय हो औँलाले छामेर जाँच्ने विधि जसलाई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेसन (डी.आर.इ) भनिन्छ । दिशा गर्ने बानीमा परिवर्तन हुँदा, दिशा राम्रो सँग ननिख्रने समस्या हुँदा, रगत बग्दा यो जाँच गर्नै पर्छ । ठुलो आन्द्रामा हुने क्यान्सरमध्ये लगभग एक तिहाइ यही ठाउँमा रहेको हुन्छ । यो जाँचको लागि एक जोडी पन्जा, औँला चिप्लो बनाउने जेली, टर्च लाइट र एक जना एसिस्टेण्ट चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता चीजको अभावमा यो जाँच गर्न छुटाउनु हुँदैन । दिसासँग सम्बन्धित लक्षणहरू भएर आएका बिरामीमा यो जाँच गर्न छुटाइयो भने चिकित्सकले ठुलै अपराध गरेको ठहरिन्छ । एउटा औँला पसाएर जाँच नगर्दा पछि खुट्टै पसाएर जाँच गर्नु पर्ला है भन्ने व्यङ्ग्यात्मक बोली पनि छ चिकित्सा शास्त्रमा ।
मलद्वार र आसपासका सुरुवाती अवस्थाको क्यान्सर पत्ता लगाउन डी.आर.इ. अचुक विधि हो । त्यसपछि मात्र पाइप लगाएर जाँच गर्ने, बायोप्सी लिने र अन्त कति फैलिएको छ भनेर पत्ता लगाउन अल्ट्रासाउन्ड, सी.टी. स्क्यान, एम.आर.आइ. स्क्यान आदि विधिहरू सहयोगी हुन्छन् ।
बिरामीले मन खुसी औषधि किनेर खानु अथवा चिकित्सकलाई जँचाउन ढिला गर्नु बिरामी पक्षको कमजोरी हो, बिरामीलाई सम्बन्धित चिकित्सकलाई जँचाउन समयमै सही सल्लाह दिन नसक्नु आफन्तको कमजोरी हो । त्यस्तै जाँच गर्न आइसकेका बिरामीलाई राम्रोसँग जाँच नगरिदिनु वा डी.आर.इ. नगर्नु चिकित्सकको कमजोरी हो । यस्ता दुःखदायी घटनाहरू दोहोरिन नदिन हामी सबै सचेत रहनु पर्छ ।